I-LegalZoom Isebenzisa Ubuciko Bokufakelwa Kusetshenziswa iVeritone One | Martech Zone
NgoLwesine, July 20, 2017 NgoLwesine, July 20, 2017 Douglas Karr
Emhlabeni osheshayo wemidiya eku-inthanethi, igama lomkhiqizo kufanele lithathwe njengendaba yokuphila nokufa. Kepha, uma kukhulunywa ngokusakazwa kwemidiya, ukuphatha yonke into abantu abayishoyo ngomkhiqizo kungazizwa kungenzeki. I-FCC ibhale ngaphezulu kwe- Iziteshi zethelevishini nezomsakazo ezingama-32,000 ezisakazwa nsuku zonke, ishiya ochwepheshe bezimpawu zokumaketha bezama ukubuyekeza nokuhlala ngaphambi kwezilinganiso ze-ROI zabakhangisi nababambe iqhaza.
Ngokujabulisayo, ukuhlakanipha okungekhona okwangempela ithuthukile ukungenisa, ukuvula nokuhlaziya okuqukethwe okuqondile, kusuka emsakazweni wendawo kuya ekubalweni komdabu ku-TV ebukhoma - inikezela ngemikhiqizo ikhono lokuthola imizwa engemihle nevumayo ngamagama asemqoka angasesheka, ukukhomba ngokushesha izikhalazo nokugqamisa ukuthokozela. Izinjini zokuqonda zingathola amaphimbo, amagama, ama-logo, nezinto, okwenza imininingwane yolwazi yamabhizinisi ukukhipha kuphela okudingekayo, kungabikho isikhathi esilahlekile sokubuyekeza amahora namahora we-footage.
I-Veritone eyodwa iyisibonelelo sika I-Veritone, Inc. kanye ne-ejensi yokukhangisa esebenza ngokugcwele edala ukukhangisa kwendabuko nokwendabuko kwemikhiqizo edumile. IVeritone imemezele ukunwetshwa kwezinsizakalo nge LegalZoom, umhlinzeki oholayo wezixazululo ezisemthethweni zamabhizinisi amancane nemindeni, kusukela emisebenzini yayo yokuqala yokuhlola imikhankaso yasendaweni, ukuletha imikhankaso ephelele kazwelonke, yasekhaya neye-podcasting.
IVeritone One ithuthukisa ukukhangisa kwendabuko nokwendabuko ngobuchwepheshe ekuthengeni abezindaba, ukuhlela, ukuthuthukisa ubuciko nokuzibophezela ekwenzeni kahle ekwakheni ubudlelwano nabasakazi abaphezulu, abasakazi bakazwelonke. Ngokubambisana, iLegalZoom neVeritone One bakhe imikhankaso eqinile eye yaphakamisa ukuqwashiswa kwezimakethe zeLegalZoom kusetshenziswa i-podcasting nokusingathwa kokuvumela.
I-Veritone One ihlanganisa ubunikazi ukuhlakanipha okungekhona okwangempela (AI) ubuchwepheshe, i-Veritone Platform, ukuhlinzeka ngokusobala kwe-LegalZoom kanye nokunemba kokuqinisekiswa kwesikhangiso ngesikhathi sangempela, kanye nokulandela umkhankaso womncintiswano.
I-Veritone Platform ifaka izinkulungwane zamahora wokuqukethwe komsindo nevidiyo nsuku zonke, isebenzisa izixhumi zayo ezinamandla zezinjini ezihlanganisiwe, kufaka phakathi ukutholwa kwe-logo, ukucubungula ulimi lwendalo, ukuthwebula iminwe yezwi, ukubonwa kobuso nokutholwa kwento, kwakha i-database kanye nenkomba ecebile nengasebenza. Ipulatifomu inikeza ukuhlakanipha okwakungatholakali phambilini kanye nosesho olunamandla nokutholwa okuzoqhubeka nokwandisa ukusetshenziswa kwamakhasimende okungaxhunyiwe ku-inthanethi nokusebenza kahle.
IVeritone inikeza isixazululo esihlanganisiwe esisuselwe emafini esitholakalela ochwepheshe bemidiya ukuthi bashuthe, bakhombe, baseshe, futhi bandise okusakazwayo nokuqukethwe kwedijithali. Ipulatifomu yakhelwe ngokukhethekile ukunika amandla yonke inhlangano ngobuhlakani obuseduze nesikhathi sangempela, kusuka ekuthengisweni nasezinhlelweni kuya ekuphathweni.
AbakwaLegalZoom bayaziqhenya ngokuba yikhasimende lokuqala leVeritone One eminyakeni engaphezu kwengu-15 eyedlule, futhi siye saqhubeka nokubukhulisa lobu budlelwano ngenxa yekhwalithi yensizakalo nezinto ezintsha abangazinikeza ngePlatform yaseVeritone. Isu lokudala, ikhophi kanye nokuqukethwe abakwenzele imikhankaso yethu kanye nobudlelwano ababukhuthazile nabagqugquzeli kuqinisekisa ukuthi sihlala sihlangana kahle nakubantu ababhekiswe kubona kanye nezethameli. UJohn Suh, Isikhulu Esiphezulu se-LegalZoom
Kubalulekile ukukala i-ROI ngokulandela nokurekhoda ukubalulwa komkhiqizo njengamadola asetshenzisiwe, futhi ukuqinisekisa ukuthi isikhangiso sisebenza nhlobo kuyisinyathelo sokuqala. Ukuqinisekiswa kokukhangisa, noma "ukuhlolwa komoya" kwenziwe ngesandla ngaphezulu kwamahora amaningi iminyaka; kungaba umthwalo owodwa noma ngaphezulu womsebenzi wokuhlola umoya nokuqapha isiminyaminya sezimoto noma izimpendulo ezenzakalweni zokusakaza zemikhiqizo emikhulu. Ngaphezu kwalokho, umsebenzi oyisidina kangaka ohilela ukusakazwa kwamahora amaningi kuthelevishini nasemsakazweni kungaholela emaphutheni abantu.
Esikhundleni salokho, ukusebenzisa izinjini eziningi zokuqonda kupulatifomu eyodwa ukuhlaziya nokwethula idatha ku-real-time akugcini ngokukhulula amahora wesikhathi lapho isisebenzi sisebenzisa amasethi wamakhono wokudala amaningi, futhi kungonga imali.
Ukusebenza neLegalZoom kube ukubambisana okuhle. Okuqale ngokuhlolwa komsakazo wakuleli kukhule kwaba yithuba lokudlulisa umyalezo wabo omusha futhi obalulekile wokuthi usizo lwezomthetho kufanele lutholakale kuwo wonke umuntu. Ukuzinikela nobuchule beqembu lethu, okubhangqwe namandla e-Veritone Platform kunikeza isisekelo esihle njengoba silawula imikhankaso emisha kazwelonke neyasekhaya. URyan Steelberg, umongameli weVeritone One
Njengoba isikhathi semidiya siya ngokuya siba yedijithali kuphela, ochwepheshe bokubeka uphawu lokumaketha kufanele bamukele ubuchwepheshe obusha, njengamapulatifomu enjini yokuqonda ye-AI, ukuze bahlale beqhudelana. Ngoba idatha yakha ngokusobala usuku ngalunye, amahora womuntu azokwanda futhi, adale ubunzima kubasebenzi futhi anciphise nesikhathi sokuphendula esibucayi semikhiqizo ehlala ku Okusheshayo isiko lokuphendula. Ukuhambisa amathuluzi anciphisa imisebenzi eyisicefe kuvula amandla okudala okugxila kuzinhloso zebhizinisi ezinkulu, ngenkathi futhi kukhulisa ukwethembeka kwamakhasimende futhi ekugcineni, nemali engenayo.
Ngeminye imininingwane ngeVeritone One, vakashela VeritoneOne.com. Ukuze ufunde kabanzi ngobuchwepheshe bokuqhamuka obuguqula ubuhlakani bokufakelwa bube ubuhlakani bokwenza, vakashela I-Veritone.com.
Tags: ukuphathwa kwezikhangisoaiukuhlakanipha okungekhona okwangempelakwezobuchwephesheUJohn SuhzomthethoURyan SteelbergI-Veritone